Wararka - Fasalka Jacaylka: Waa maxay ukun boodeysaa?
Ukunta ku boodka ahi waa alaab galmo oo siigaysasho dumar ah, waxyar oo qurux badan ayaa loo adeegsadaa ninka iyo naagta shukaansiga waxtarka leh. Ukunta ku boodka ah waxay leedahay hawsha gariirka, si markaa haweenku u sii wadaan orgaankooda. Waxay leedahay saameyn wanaagsan oo horumarineed oo ku saabsan daaweynta jahwareerka galmada dumarka, kacsiga la'aan iyo cuduro kale.
Maxaa loogu magac daray ukunta boodaya? Malaha maxaa yeelay wuxuu u eg yahay ukunta. ukunta boodaya waxay u qaybsantahay: ukunta boodada siligga leh iyo ukunta boodi wireless. Guud ahaan ukunta boodboodaya waxay isticmaashaa qalab caafimaad oo heerkiisu sareeyo PVC oo aan sun lahayn polymer. isticmaalka kahor iyo kadib, waa inaad fiiro gaar ah u leedahay nadaafadda iyo nadaafadda. Qaybta wareegga gudaha ee ukunta boodka aan biyaha-diidka ahayn waa inaysan taaban biyaha, laakiin dareeraha jacaylka haweenka ee ku boodda beedka wax saameyn ah kuma yeelan, waxaa loo isticmaali karaa si ammaan ah.
Ukunta ka boodeysa, oo sidoo kale loo yaqaan ukunta shoogga, oo ku qalabeysan matoorrada shoogga. Cabirkooda yar iyo kicinta xoogan awgood, ukunta boodka ayaa si weyn caan ugu noqdeen dumarka da'da yar, laakiin sidoo kale haweenka cad-cad, dumarka haraaga ah. Sababtoo ah ukunta oo la boodo, xitaa mid yar, laakiin waxay u keeni kartaa dareen xoog leh raaxeysiga jirka iyo maskaxda. Tani waa sixirka ugxanta boodboodaya, waxay si wax ku ool ah u kicin kartaa meelaha xasaasiga ah ee jirka dumarka, gaar ahaan kintirka, ibta, qoorta iyo gudaha bowdada iyo meelaha kale ee xasaasiga ah, kicintaan waxaa dhaqso ugu gudbin doona neerfaha maskaxda xarunta, si loo gaaro isla xiisaha galmada, si jirka iyo maskaxdu ay u wada istareexaan. Sidaa darteed, daaweeyayaasha galmada ajnabiga ah sidoo kale badanaa waxay u isticmaalaan ukumo boodaya si ay ula dhaqmaan haweenka qaba hargabka galmada.
Dabcan, ukunta boodka sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa ragga, laakiin kicinta iyo xiisaha ragga ayaa aad uga hooseeya kana adag tan haweenka. Haweenka keligood ah ama dumarka aan yeelan karin nolol galmo oo caadi ah, ukun boodku waa lamaane wanaagsan. Way fududahay in la isticmaalo, saameyntu waa mid aad u fiican, haweenkuna si dhakhso leh ayey u gaari karaan orgasmka. Ukunta ka boodeyso biyuhu xitaa waa lagu isticmaali karaa musqusha iyo barkadda dabaasha. Xakamaynta fogaanta waxay noqon kartaa kontoroolkooda fog iyo kuwa kale ee hago. Waa noocyo kala duwan oo ciyaar ah, waxaad la kulmi kartaa xamaasad muddo dheer luntay.
Adeegsiga boodada beedka:
1, Rux qeybta kintirka markaad sameysid siigaysiga, kicinta joogtada ah iyo xoogsaarida waxay si weyn uga hor imaan kartaa waqtiga kintirka xubinta taranka marka loo eego si fudud gacanta.
2, Markaad samaynayso siigaysiga, ukunta boodka sidoo kale waa la galin karaa si loo kiciyo dhibcaha G.
3, Markay lamaanayaashu isdhaafsadaan, u isticmaal si looga fogaado dhibta aysiidhka gacantu ku rido.
4, ukunta boodka wireless waxaa loo isticmaali karaa lammaanaha markay banaanka joogaan.
1, ka dib helitaanka ukunta boodaya, waxay u baahan tahay in la nadiifiyo ka dibna la isticmaalo. Ku maydh biyo diiran waa caadi.
2, mari saliid dhexdhexaad ah ugxanta iyo afka siilka.
3, hadday tahay nooca batteriga, soo saar batteriga ka dib isticmaalkiisa, haddii kale batteriga lama isticmaali doono.
4, haddii ay tahay nooca lacag-ku-shubista, lacag ka hor intaadan isticmaalin si looga fogaado koronto la'aan marka lagu jiro nusaska habka masturbada.
5, waxa ugu xasaasisan waa in fiiro gaar ah la siiyo aruurinta.
Ukunta ku boodka ayaa ah heerka ugu horeeya ee alaabta lagu ciyaaro ee galmada, haddii nolosha galmada ay ka maqan tahay kicin iyo raaxo, ukunta oo la boodo ayaa noqon doonta dookhaaga ugu fiican.